Yaa kusoo baxay doorashadii xildhibaan ee ka dhacday Baydhabo? | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Yaa kusoo baxay doorashadii xildhibaan ee ka dhacday Baydhabo?
Yaa kusoo baxay doorashadii xildhibaan ee ka dhacday Baydhabo?
Guddiga doorashada ee Koonfur Galbeed ayaa ku dhowaaqay in Maxamed Barri Maxamuud uu helay 72 cod, halka musharaxii la tartamayay uus helay 23 cod.
Doorashada ayaa haatan sii socota, waxaana la guda-galay kuraasta xigta ee loo qorsheeyey in isla maanta doorashadooda lagu qabto magaalada Baydhabo.
Arsenal oo kula tartameysa Tottenham Hotspur saxiixa Clement Lenglet
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay kula dagaalanto Tottenham Hotspur saxiixa daafaca Barcelona Clement Lenglet . Xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska ayaa hoos u...
Sheekh Shariif Maxaa ku Kalifay Inuu Qiyaano Midowga Musharaxiinta 15/12/2021
Kooxda Liverpool oo Caawa la Wareegi Doonta Hoggaanka Horyaalka Premier...
Al-Shabaab oo shaacisay magaca iyo qabiilka ninkii 2-aad ee raggii weeraray...
Fahad Yasin ma loo diidi doonaa shahaadada xildhibaannimada?
Maxkamad ka aamustay Cadaalada Ikraan Tahliil oo u hiilinaysa Fahad yaasiin...
Go’aan culus oo kasoo baxay shirkii ay Villa Somalia soo agaasintay...
Sidee ayaa loola dhaqmaa madaxda Al-Shabaab ee isku dhiiba DF Soomaaliya?
AXMED MADOOBE oo war kasoo saraay doorashada golaha shacabka xilli xiisad...